एसइई वा ‘ए प्लस’ समग्र जीवनको मापन होइन – Nayapath.com
वस्तु मापनका निश्चित मापदण्ड र आधार छन् । ठोस, तरल र ग्याँस मापनका आफ्नै मापदण्ड र आधारसमेत छन् । वजनको मापन पक्कै नै सरल हुन्छ । प्रविधिले वस्तुको गुणको मापनलाई समेत सरल बनाएको छ । यसको तुलनामा मानवीय स्वभाव, आचरण, व्यवहार र परिवर्तनलाई मापन गर्नु निश्चित नै कठिन कार्य हो । मानवीय संवेग क्षमताको मूल्याङ्कन र मापनको कसी केलाई मान्ने ? जटिल प्रश्न उब्जन्छ नै । झनै उदेकलाग्दो विषय त के छ भने संवेदनशील विषयमा समेत सतही मापन हुनु झनै डरलाग्दो भएन र ? यहाँ उठाउन खोजेको विषय शिक्षा क्षेत्रको एउटा जटिल समस्यासँग सम्बन्धित छ ।
नेपालका सन्दर्भमा विद्यार्थी सक्षमताको मापनको कसी अन्तिम परीक्षालाई बनाइन्छ । विद्यालय तहको शिक्षा विषयगत ग्रेडिङमा मापन गरिन्छ । १ वर्षमा पढेको विषयवस्तुलाई विद्यार्थीले ३ घण्टामा जसरी व्यक्त गर्छन् वा लेख्छन् त्यो नै विद्यार्थीको स्तर मापनको आधार मानिएको छ । जबकि ग्रेडिङ प्रणालीले त्यसो भन्दैन । ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार प्रत्येक दिनको कार्य सम्पादनको आधारमा अभिलेखित मूल्याङकन नै तह वा स्तर निर्धारणको आधार मानिन्छ । यस मामलामा सरोकारवाला निकाय बेखवर देखिन्छन् । शैक्षिक नीति निर्माण कर्ता होस् कि विद्यालय वा विश्वविद्यालय सबै तहमा यो समस्या यथावत् छ ।
एकजना सहपाठी मित्रले कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्कदा थकित मुद्रामा गुनासोको पोको फुकाउनुभयो–‘पढाउन नसकिने भो ।’ मैले बुझेँ– वहाँको सङ्केत विद्यार्थीको आचरणसँग सम्बन्धित थियो । दिनहुँजसो अभिभावकका गुनासा आउँछन् –‘घरमा भनेको मान्दैन सम्झाइदिनुहोला ।’ एकदिन एकजना शिक्षक मित्रले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो –‘आजकलका केटाकेटी बिग्रे । आज पाँच कक्षामा पढ्ने केटाहरु फुटबल हारेको झोँकमा रेष्टुरेन्टमा छिरेर चुरोट तानेको देखेँ । होटलवालालाई सम्झाएँ पनि । यस्ता ओठ निचोर्दा दूध आउने जस्ता बालकलाई चुरोट दिनुहुन्न भन्ने बताएँ । तर मेरो कुराले होटलवालालाई कत्ति पनि छोएन ।’ यी एक दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यो वास्तविकता हो । न विद्यालयमा हामीले नैतिक र चरित्रवान् विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्यौँ न त परिवार र समाजबाट नै राम्रा कुरा ग्रहण गर्ने संस्कार र परिपाटीको विकास हुन सकेको छ।विद्यार्थीको सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने कहिलेसम्म ‘ए’ वा ‘ए प्लस’ आयो भनेर गर्व गर्ने ?
विद्यार्थी मापनको आधार केवल विषयगत ज्ञान मात्र हुन सक्दैन । भाषामा कमजोर भएको गणित, विज्ञान, अन्य प्राविधिक विषयमा अब्बल हुन सक्छ । गणित, विज्ञानमा कमजोर विद्यार्थी कला, साहित्यमा राम्रो हुन सक्छ । यसका अलवा अभिनय र खेलकुदमा राम्रो हुन सक्छ । तर यी सबैसँग जोडिने विषय नैतिक आचरण र सामाजिक व्यवहार हो । एउटा विद्यार्थीले घर, परिवार, राष्ट्र, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित नैतिक आचरण व्यवहार नसिकेसम्म कसरी ज्ञान आर्जन गरेको मान्ने ?
नेपाल सरकारले विगत केही वर्ष यता माध्यमिक तहसम्म ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको छ । ग्रेडिङ प्रणाली विश्वमा मान्यता पाएको स्तर मापनको आधार हो । तर हाम्रा विद्यालयहरु अझै पनि परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । ग्रेडिङ प्रणालीले सोहीअनुसारको कक्षा क्रियाकलाप र दैनिक कार्य सम्पादनको मूल्याङकनको माग गर्छ । तर विडम्बना ४०–८० विद्यार्थी सङ्ख्या राखेर कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयमा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण र दैनिक कार्यसम्पादन मूल्याङकन असम्भव प्रायः देखिन्छ ।
भ्रम र यथार्थः
राम्रो ग्रेड सफलताको आधार पक्कै हो तर पनि ठूलो भ्रम एसईईको नतिजालाई समग्र जीवनको मापन ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जब मार्कसिटको ग्रेड र सामाजिक व्यवहारिक जीवनको ग्रेड फरक कुरा हुन् । एसईईमा ‘ए प्लस’ ल्याएको विद्यार्थी जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट बन्छ भन्ने छैन । ‘बि’ वा ‘सी’ ग्रेड ल्याएको विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएको विद्यार्थीले भन्दा जीवनलाई अझै उचाईमा लान सक्छ । तसर्थ मार्कसिटको ग्रेडलाई हेरेर बढी उत्साहित र एकदम हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । बरु ग्रेड राखेर फेसबुकका भित्ता रङ्ग्याउने अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको ग्रेडअनुसारको सामाजिक जीवनमा क्रियाशिलता छ कि छैन भन्ने विषयमा थोरै मात्र संवेदनशील बन्न सक्ने हो भने विद्यार्थीको भोलिको जीवन सहज बन्नमा सहयोग पुग्छ ।
शिक्षा र सामाजिक जीवनमा विरोधाभासः
सामाजिक शिक्षा पढेको विद्यार्थी साथीभाइसँग झगडा गर्छ र सामाजिक मूल्य, मान्यता र संस्कारप्रति बेखवर रहन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा पढेको विद्यार्थी बसको झ्यालबाट विना सङ्कोच सडकमा फोहोर फ्याँक्छ । नैतिक शिक्षा पढेको विद्यार्थी साथीभाइसँग झगडा गर्छ भने घर, परिवार, अभिभावकलाई सम्मान गर्न जान्दैन । शिक्षकलाई सम्मान गर्न सक्दैन । यसमा ‘ए प्लस’ वा ‘ए’ को भूमिका के त ? विद्यार्थीले आर्जन गर्ने शिक्षा सामाजिक जीवनसँग जोड्न नसकेसम्म यो विरोधाभास हट्ने छैन । यसप्रति सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार बन्नै पर्छ, यदि हामीले हाम्रा सन्ततिलाई सांस्कारिक र सभ्य नागरिकका रुपमा देख्न चाहने हो भने ।
अन्त्यमा, ‘ए प्लस’ वा ‘ए’ को विज्ञापनभन्दा पनि ग्रेडिङ प्रणालीको मर्मलाई बुझेर सोहीअनुसार कक्षा क्रियाकलाप र दैनिक कार्यसम्पादनको मूल्याङकन गर्ने हो भने विद्यार्थीको पठन संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव त पार्छ नै आचरण र व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउने निश्चित छ ।